.: ခရီးတစ်ခါထွက်ရင် ဘယ်လို ပြင်ဆင်ရတယ်ဆိုတာ မေစု ဟာသလေးနှောပြီး ပြန်ပြောပြ
ခရီးတစ်ခါထွက်ရင် ဘယ်လို ပြင်ဆင်ရတယ်ဆိုတာ မေစု ဟာသလေးနှောပြီး ပြန်ပြောပြ
ခရီးခဏခဏထွက်ရတော့ ခရီးထွက်ခြင်းအပေါ် ဘယ်လို သဘောထား သလဲ ဆိုတာကို သုံးသပ်ကြည့်ပါတယ်။ အဖြေကတော့ သိပ်ကြာကြာ မရှာရပါဘူး။ အလုပ်သဘောနဲ့ ပဲမြင်ပါတယ်။ ခရီးမသွားခင် ပြင်ဆင် ရမဲ့ ကိစ္စတွေ၊ ခရီးသွားစဉ် လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ စုဆောင်းရတာတွေ၊ အရေးကြီးဆုံးကတော့ အလုပ်အများဆုံးဖြစ်မြောက်ပြီး လိုအပ်တဲ့ နားချိန်လေးတွေလည်း ရနိုင်မဲ့ အချိန်ဇယားဆွဲဖို့ ပါပဲ။ ဒီလိုအချိန်ဇယား ဆွဲရေးနဲ့ရုန်းကန်ရဲတဲ့ သူကတော့ ကျွန်မ ကိုယ်ရေးအရာရှိ ဒေါက်တာ တင်မာအောင်ပါပဲ။ တစ်ခါတစ်ခါ သွားမဲ့မြို့ / နိုင်ငံက ပုဂ္ဂိုလ် များ နဲ့ဒေါက်တာတင်မာအောင် ဆွေးနွေးတာတွေ နားထောင်ရတာ ရယ်စရာ နည်းနည်းကောင်းပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဟိုဘက်က ဆွေးနွေးတဲ့သူက အမျုိးသားဆိုရင် ရယ်ရွှင်စဖွယ်ပါပဲ။ တစ်ခါတစ်ရံ အစီအစဉ် တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားထားပေးတဲ့ အချိန် မလုံလောက်ဘူး ထင်ရင် ဒေါက်တာ တင်မာအောင် ပြောတာတွေ ထဲမှာ “အမျိုးသမီးတွေနဲ့ အမျိုးသားတွေ ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေမတူဘူး။ ရှင်တို့ တွေက အပေါ် အကျီ င်္လေးပြင် ၀တ်လိုက်တာနဲ့ ပြီးတယ်။ ကျွန်မတို့ က ဒီထက် ပိုပြီးအလုပ်ရှုပ်တယ်” စသဖြင့် တစ်ခါတလေ ဒီလိုအငြင်းပွား မှုမျိုးကို အီးမေးလ်နဲ့ တောင် လုပ်နေရတာလေးတွေက ပင်ပန်းတဲ့ အထဲက စိတ်ပေါ့ပါးစရာ ဟာသကွက် ကလေးများ ဖြစ်ရပါတယ်။
ခရီးသွားတဲ့အခါ အရေးအကြီးဆုံး ကတော့ ပီပြင်တဲ့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုပါပဲ။ ခရီးသွားခြင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ကျွန်မရခဲ့ရတဲ့ တန်ဖိုးအထားရဆုံး သင်ခန်းစာ တစ်ခုကတော့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုရဲ့ တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မ တက္က သိုလ်ကျောင်းသူ တစ်ဦးအနေနဲ့ အောက်(စ်)ဖို့ကို ရောက်သွားတဲ့ အခါက ပထမဦးဆုံးရခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာ တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ကိစ္စတွေ နဲ့ ပတ်သက်လို့ သာ မဟုတ်ပါဘူး။ နိစ္စဓူဝ လူမှုရေး ကိစ္စများတွင် လည်း အရေးပါပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ကျွန်မနဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် ပေါင်းပြီး အခြားကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားအချို့ ကို ထမင်းကျွေးဖိတ်တဲ့အခါမှာ ကျွန်မတို့ နှစ်ဦး သေသေချာချာ အစီအစဉ် ဆွဲပြီး လုပ်ကြပါတယ်။
ထမင်းစားဖို့ ဆိုပေမဲ့ အစားအစာတင် မကပါဘူး။ ဘယ်သူတွေကို အတူ ဖိတ်ရင် အားလုံးအတွက် စိတ်ဝင် စားဖွယ်ရာ၊ ပျော်စရာဖြစ်မယ် ဆိုတာတွေ ကိုလည်း ထည့်ပြီးစဉ်းစားရပါတယ်။ အသေအချာ စီစဉ်တဲ့အတွက်လည်း ကျွန်မတို့ ထမင်းစားပွဲလေးဟာ အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ အားလုံးအတွက် အမှတ်ရဖွယ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဘာမှသိပ်ပြီး အရေးမကြီးလှတဲ့ ကျောင်းသား - ကျောင်းသူများ စုဝေး စားသောက်ပွဲ လေးတောင် အသေအချာ စီစဉ်မှ ရလဒ်ကောင်းနိုင်တယ် ဆိုတာ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ စွဲကျန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်လိုကိစ္စမဆို ကြို တင်ပြင်ဆင်မှု လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို လက်ခံယုံကြည်ပါတယ်။ ခရီးမထွက်မီ စီစဉ်ရသည်များ က ပိုမို ပင်ပန်း ပါတယ်။ ဒီဘက်က ထားခဲ့ရမဲ့အလုပ်တွေလည်း မလစ်ဟင်းရအောင်၊ ဟိုရောက်တော့လည်း တာဝန် ကျေအောင် ၊ ပြန်လာတဲ့အခါမှာလည်း အလုပ်တွေ မနိုင်မနင်း မပုံနေအောင် အဘက်ဘက်ကို တွက်ပြီး လုပ်ရပါတယ်။
ဘ၀ခရီးဆိုတာလည်း ဒီလိုပါပဲလားလို့ တွေးမိပါတယ်။ တစ်နေရာ တစ်ချိန် တည်းအတွက် တွက်ပြီး လုပ်လို့မရပါလား။ များပြား လှတဲ့ အတွက် အချက်တွေနဲ့ ကိုယ်လိုရာလမ်းကို လွယ်လွယ်နဲ့ မဟုတ်တောင်မှ မှန်မှန် ကန်ကန် လျှောက်သွားနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ရပါတယ်။
အတွဲ(၁) အမှတ်(၄၃) ဒီလှိုင်းဂျာနယ်ပါ "ဒီစကား" ဆောင်းပါး , Credit to original writer
Posted by အာလူးလေး
Blog Archive 12/06 - 12/13 (1) 11/08 - 11/15 (1) 11/01 - 11/08 (2) 09/27 - 10/04 (3) 09/20 - 09/27 (1) 09/13 - 09/20 (6) 09/06 - 09/13 (7) 08/30 - 09/06 (7) 08/23 - 08/30 (6) 08/16 - 08/23 (4) 08/09 - 08/16 (8) 08/02 - 08/09 (3) 07/26 - 08/02 (3) 07/19 - 07/26 (5) 07/12 - 07/19 (6) 07/05 - 07/12 (14) 06/14 - 06/21 (2) 06/07 - 06/14 (3) 05/24 - 05/31 (4) 05/17 - 05/24 (7) 05/10 - 05/17 (3) 05/03 - 05/10 (1) 04/19 - 04/26 (2) 04/12 - 04/19 (3) 03/29 - 04/05 (7) 03/22 - 03/29 (4) 03/15 - 03/22 (6) 03/08 - 03/15 (12) 03/01 - 03/08 (12) 02/22 - 03/01 (9) 02/15 - 02/22 (3) 02/08 - 02/15 (21) 02/01 - 02/08 (7) 01/25 - 02/01 (16) 01/18 - 01/25 (8) 01/11 - 01/18 (8) 01/04 - 01/11 (4) 12/28 - 01/04 (1) 12/21 - 12/28 (7) 12/14 - 12/21 (6) 12/07 - 12/14 (1) 11/30 - 12/07 (3) 11/23 - 11/30 (9) 11/16 - 11/23 (1) 11/09 - 11/16 (15) 11/02 - 11/09 (9) 10/26 - 11/02 (15) 10/19 - 10/26 (8) 10/12 - 10/19 (10) 10/05 - 10/12 (12) 09/28 - 10/05 (35) 09/21 - 09/28 (13) 09/14 - 09/21 (14) 09/07 - 09/14 (13) 08/31 - 09/07 (12) 08/24 - 08/31 (19) 08/17 - 08/24 (12) 08/10 - 08/17 (11) 08/03 - 08/10 (6) 07/27 - 08/03 (14) 07/20 - 07/27 (16) 07/13 - 07/20 (21) 07/06 - 07/13 (17) 06/29 - 07/06 (11) 06/22 - 06/29 (13) 06/15 - 06/22 (11) 06/08 - 06/15 (12) 06/01 - 06/08 (8) 05/25 - 06/01 (21) 05/18 - 05/25 (23) 05/11 - 05/18 (25) 05/04 - 05/11 (10) 04/27 - 05/04 (6) 04/20 - 04/27 (9) 04/13 - 04/20 (9) 04/06 - 04/13 (9) 03/30 - 04/06 (13) 03/23 - 03/30 (20) 03/16 - 03/23 (6) 03/09 - 03/16 (9) 03/02 - 03/09 (8) 02/23 - 03/02 (10) 02/16 - 02/23 (13) 02/09 - 02/16 (29) 02/02 - 02/09 (16) 01/26 - 02/02 (23) 01/19 - 01/26 (18) 01/12 - 01/19 (10) 01/05 - 01/12 (10) 12/29 - 01/05 (18) 12/22 - 12/29 (13) 12/15 - 12/22 (16) 12/08 - 12/15 (16) 12/01 - 12/08 (12) 11/24 - 12/01 (21) 11/17 - 11/24 (26) 11/10 - 11/17 (23) 11/03 - 11/10 (16) 10/27 - 11/03 (21) 10/20 - 10/27 (29) 10/13 - 10/20 (18) 10/06 - 10/13 (22) 09/29 - 10/06 (22) 09/22 - 09/29 (28) 09/15 - 09/22 (34) 09/08 - 09/15 (39) 09/01 - 09/08 (35) 08/25 - 09/01 (35) 08/18 - 08/25 (43) 08/11 - 08/18 (41) 08/04 - 08/11 (46) 07/28 - 08/04 (31) 07/21 - 07/28 (24) 07/14 - 07/21 (19) 07/07 - 07/14 (25) 06/30 - 07/07 (31) 06/23 - 06/30 (27) 06/16 - 06/23 (21) 06/09 - 06/16 (19) 06/02 - 06/09 (14) 05/26 - 06/02 (16) 05/19 - 05/26 (7) 05/12 - 05/19 (11) 05/05 - 05/12 (9) 04/28 - 05/05 (14) 04/21 - 04/28 (15) 04/14 - 04/21 (15) 04/07 - 04/14 (9) 03/31 - 04/07 (18) 03/24 - 03/31 (37) 03/17 - 03/24 (34) 03/10 - 03/17 (39) 03/03 - 03/10 (29) 02/24 - 03/03 (21) 02/17 - 02/24 (23) 02/10 - 02/17 (34) 02/03 - 02/10 (35) 01/27 - 02/03 (26) 01/20 - 01/27 (34) 01/13 - 01/20 (30) 01/06 - 01/13 (23) 12/30 - 01/06 (31) 12/23 - 12/30 (25) 12/16 - 12/23 (29) 12/09 - 12/16 (32) 12/02 - 12/09 (59) 11/25 - 12/02 (43) 11/18 - 11/25 (43) 11/11 - 11/18 (24) 11/04 - 11/11 (22) 10/28 - 11/04 (19) 10/21 - 10/28 (22) 10/14 - 10/21 (23) 10/07 - 10/14 (23) 09/30 - 10/07 (9) 09/23 - 09/30 (12) 09/16 - 09/23 (14) 09/09 - 09/16 (25) 09/02 - 09/09 (36) 08/26 - 09/02 (24) 08/19 - 08/26 (21) 08/12 - 08/19 (28) 08/05 - 08/12 (27) 07/29 - 08/05 (22) 07/22 - 07/29 (12) 07/15 - 07/22 (16) 07/08 - 07/15 (12) 07/01 - 07/08 (24) 06/24 - 07/01 (34) 06/17 - 06/24 (43) 06/10 - 06/17 (48) 06/03 - 06/10 (43) 05/27 - 06/03 (77) 05/20 - 05/27 (75) 05/13 - 05/20 (63) 05/06 - 05/13 (65) 04/29 - 05/06 (45) 04/22 - 04/29 (59) 04/15 - 04/22 (44) 04/08 - 04/15 (65) 04/01 - 04/08 (86) 03/25 - 04/01 (63) 03/18 - 03/25 (63) 03/11 - 03/18 (85) 03/04 - 03/11 (84) 02/26 - 03/04 (63) 02/19 - 02/26 (60) 02/12 - 02/19 (41) 02/05 - 02/12 (31) 01/29 - 02/05 (25) 01/22 - 01/29 (22) 01/15 - 01/22 (28) 01/08 - 01/15 (26) 01/01 - 01/08 (16) 12/25 - 01/01 (20) 12/18 - 12/25 (12) 12/11 - 12/18 (12) 12/04 - 12/11 (12) 11/27 - 12/04 (8) 11/20 - 11/27 (14) 11/13 - 11/20 (33) 11/06 - 11/13 (15) 10/30 - 11/06 (27) 10/23 - 10/30 (16) 10/16 - 10/23 (21) 10/09 - 10/16 (32) 10/02 - 10/09 (38) 09/25 - 10/02 (29) 09/18 - 09/25 (32) 09/11 - 09/18 (25) 09/04 - 09/11 (29) 08/28 - 09/04 (12) 08/21 - 08/28 (31) 08/14 - 08/21 (30) 08/07 - 08/14 (24) 07/31 - 08/07 (16) 07/24 - 07/31 (19) 07/17 - 07/24 (29) 07/10 - 07/17 (25) 07/03 - 07/10 (32) 06/26 - 07/03 (18) 06/19 - 06/26 (29) 06/12 - 06/19 (16) 05/08 - 05/15 (6) 05/01 - 05/08 (9) 04/24 - 05/01 (16) 04/17 - 04/24 (12) 04/10 - 04/17 (15) 04/03 - 04/10 (8) 03/27 - 04/03 (26) 03/20 - 03/27 (26) 03/13 - 03/20 (29) 03/06 - 03/13 (22) 02/27 - 03/06 (7) 02/20 - 02/27 (10) 02/13 - 02/20 (13) 02/06 - 02/13 (33)
၇ ဂျွန်လှိုင် သမိုင်းဖြစ်ရပ် (7)
7 ဇူလိုင် သမိုင်း တရားခံများ (4)
၈၈ မျိုးဆက်သစ် (13)
ABSDF ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် (1)
Japan လှုပ်ရှားမှု (1)
NLD STATEMENT (9)
NLD သတင်း (59)
Pro-democracy leader Aung San Suu Kyi cuts her birthday Cake. (1)
Scribd သတင်း (1)
နအဖ သတင်း (4)
မမေ့နိုင်သေးသည့် ၇ ဇူလိုင် (1)
လူ့ အခွင့်အရေး (5)
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း သန်းရွှေမိသားစု စိန်များဝယ်ယူ စုဆောင်း
၇-၃-၂၀၁၂ အာဏာရှင်လူယုတ်မှာ စစ်ဘီလူး င/သန်းရွှေ မိသားစုသည် တန်ဖိုးကြီးစိန် ဝယ်ယူ စုဆောင်းမှု အများဆုံးဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သည့် ၆ နှစ်တာ အ...
အာဇာနည်နေ့ဒို့ မမေ့
အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ ၂၀၁၄-၇-၉ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း (ခ) ဗိုလ်တေဇ (၃၂) နှစ် မြန်မာ့အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှု၏ ခေါင်းဆောင်ကြီး...
၂၀၁၅-၁၂-၁၁ ၂ဝ၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလအတွင်းက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီ၏ မဲဆွ ယ်စည်းရုံးရေး လု...
ရန်နိုင်(မြစ်မခ) မေလ ၂၇၊ ရန်ကုန်မြို့။ ရန်ကုန်မြို့ကားဈေးကွက်အတွင်း ကားအရောင်းအ၀ယ် ဈေးကွက်မှာ အကျဈေးဘက်တွင်ငြိမ်နေပြီး အရောင်းအ၀ယ...
သူရရွှေမန်း နောက်ဆက်တွဲပြသနာများနှင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး
၁၄-၈-၂၀၁၅ ယခုတလော ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ နေရာကို တာဝန်ယူထားတဲ့ သူရဦးရွေမန်းကို ရဲ နှင့် စစ်တပ် ကကူညီပြီး ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့ အဆောက်...
ဦးသန်းရွှေ အမိန့် ဖြင့် ဦးခင်ညွန့် ရဟန်း ဘောင်သို့ ဝင်
မြန်မာ စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်း ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး အငြိမ်းစား ဦးသန်းရွှေ ၏ အမိန့် ဖြင့် ဇန်န၀ါရီလ ၁၃ ရက်နေ့ က နေအိမ် အကျယ်ချုပ်မှ လ...
၁၀-၁၁-၂၀၁၁﻿ တန်ဆောင်မုန်းလသည် မြန်မာ့ ၁၂လရာသီတွင် ရှစ်လမြောက်လဖြစ်သည်။ မိုးလေကင်း စင်၍ နက္ခတ်တာရာစုံ ထွန်းပသော လလည်းဖြစ်သည်။ပင်...
၆၇ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ဂုဏ်ပြုတေး အလေးပြုပါတယ် (တေးဆို မေလှမြိုင်)
၁၉-ဇူလိုင်-၂၀၁၄ ရက်နေ့ တွင် ကျရောက်မည် ၆၇ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အား ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ တကွ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများကို မမေ့အပ်ပဲ အမှ...
ပြည်နယ်အသီးသီး၌ အာဇာနည်နေ့ တွင် အာဇာနည်
ခေါင်းဆောင်ကြီးများအား လေးစားဂုဏ်ပြု ခြင်းနှင့် ပါတ်သက်၍
အာဏာပိုင်များ မတရားဖိနှိပ်တားဆီးခြင်းကို ပြည်သူများ လက်ခံမည်မဟုတ်
၂၀၁၄-၇-၁၈ မနက်ဖန်ကျရောက်မည့်( အာဇာနည်နေ့ ) ဇူလိုင် (၁၉) ရက်နေ့ မှာ ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းနဲ့ တကွ အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများကို မမျှော်လင့်...
Copyright (c) 2010 .. Designed by Custom Blogger Templates